RASMI: Jaun Mata Oo Dhameystiray Ku Biiritaankiisa Manchester United « AYAAMO TV
RASMI: Jaun Mata Oo Dhameystiray Ku Biiritaankiisa Manchester United
547 Views Date January 26th, 2014 time 8:25 am
Juan Mata ayaa dhameystiray heshiiskii 37.1 milyan ginni ee uu uga soo wareegay Chelsea uguna biiray Manchester United, taasoo rikoor dhanka suuqa kala iibsiga u ah kooxda heysata horyaalka Premier League.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Spain ayaa tijaabada caafimaadka maray maalintii shalayto waxaana uu saxiixay heshiis la rumeysan yahay inuu gaarayo ilaa iyo xagaaga 2018.
Mata ayaa mushahar ahaan u qaadan 150 kun ginni isbuucii sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya Ingariiska, waxaana xiddigan 25 jirka ah la filayaa in kulankiisa ugu horeysa uu ku ciyaaro Old Trafford talaadada marka ay horyaalka soo dhaweynayaan Cardiff City.
“Waqtigii aan tartan cusub geli lahaa waa uu yimid” ayuu yiri Mata. “Waxaan ku faraxsanahay inana fursad u helay inaan qeyb ka noqdo cutubka xiga ee taariikhda kooxda.”
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Chelsea waa koox sarre, waxaana halkaas ku leeyahay saaxiibo badan laakiin iska diidi karin fursad aan ugu biirayo Manchester United. Waxaan indhaha ku hayaa inaan caawiyo tababaraha iyo kooxda oo aan guulo gaarno sannadaha soo socda.”
Mata oo 32 kulan u saftay Spain ayaa saxaafada loo soo bandhigi doonaa shir jaraa’id oo la qaban doono isniinta saacada geeska Afrika marka ay tahay 4:40pm.